फिलिप्स ह्यू अभिलेखागार - स्मार्टमे
ट्याग अभिलेखहरु: फिलिप ह्यू
डोम » "फिलिप ह्यू" सँग ट्याग गरिएका प्रविष्टिहरू
CES 2021 मा सम्पूर्ण होमकिट - १ products उत्पादनहरू
arlo, ces, यी 2021, DENON, ecobee, hue, jbl, स्तर, lg, लुटरन, नानोलीफ, OneLife, उल्लू गृह, फिलिप्स, फिलिप ह्यू, RIO तताउने, सोनी, स्वरभाषा, Wemo
यस लेखमा तपाईले सबै महत्त्वपूर्ण होमकिट प्रिमियरहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन सीईएस २०२१ मा भएको थियो। यसले स्मार्ट होमको विश्व आउँदो बर्षमा काटिएको स्याउसँग कस्तो देखिनेछ भन्नेको स्पष्ट चित्र देखाउँदछ। तल तपाईले फेला पार्नुहुनेछ ...
फिलिप्स ह्यू, समीक्षा
फिलिप्स सेन्ट्रिस - - फिलिप ह्यु बत्ती समीक्षा
19 सेप्टेम्बर 2020
Centris, फिलिप ह्यू, फिलिप ह्यु प्रकाश
के तपाइँ प्राय: छतको बत्तीहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ? मेरो अनुमान एकदम दुर्लभ छ, र यसको लागि एकमात्र कारण नविकरण हुन सक्छ। जे होस्, समयहरू परिवर्तन हुँदैछन्, र नयाँ बुद्धिमान बत्तीहरूको बाढीले हामीलाई अधिक र अधिक बारम्बार र अधिक गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य पार्छ ...
समाचार, फिलिप्स ह्यू
फिलिप ह्युले नयाँ उत्पादनहरूको सम्पूर्ण दायरा प्रस्तुत गर्दछ
3 सेप्टेम्बर 2020
हिजो हामीले एउटा सम्मेलनमा भाग लियौं जुन बीचमा फिलिप्सले नयाँ उत्पादनहरूको पूर्ण दायरा प्रस्तुत गर्थे। मैले स्वीकार्नु पर्छ कि मैले तुरून्तै महसुस गरें "म यो चाहन्छु!"। Signify (पहिले फिलिप्स लाइट) केहि वास्तवमै चाखलाग्दो उत्पादनहरु प्रस्तुत गरेको छ। के म ...
फिलिप ह्यूले अर्को उत्पादन प्रस्तुत गर्दछ - सेन्ट्रिस, ब्लूम र १ a०० लुमेन सहितको लाइट बल्ब!
फिलिप ह्यू, फिलिप ह्यु प्रकाश
सबैमा, हामीले नयाँ फिलिप ह्यु उत्पादनहरूको बारेमा लामो समयदेखि सुनेका छैनौं। निर्माता, तथापि, फिर्ता र एक नयाँ उत्पाद हामीलाई प्रस्तुत। दुई नयाँ बत्तीहरू, ताजा स्ट्रिपहरू र धेरै कवच बल्ब। फिलिप ह्यू व्हाइट A21 १ 1600०० लुमेनको साथ सुरु गरौं ...
ह्यु सिंक बक्सले सिरि, अलेक्सा, गुगल सहायक, डल्बी भिजन र HDR10 + को समर्थन प्राप्त गर्दछ
hue, फिलिप ह्यू
ह्यु सिंक बक्स एकदम ठूलो अपडेट हुन्छ। अब यो सिरी, अलेक्सा, गुगल सहायक, डल्बी भिजन र HDR10 + को समर्थन हुनेछ। सिग्निफाइले पहिले नै उपयुक्त अपडेट जारी गरेको छ। ह्यु सिंक बक्ससँग HD एचडीएमआई कनेक्टर्सहरू छन् जुन ...
गृह सहायक, फिलिप्स ह्यू, समीक्षा
फिलिप ह्यू बल्ब - तीन बल्ब समीक्षा
फिलिप्स, फिलिप ह्यू, फिलिप ह्यु प्रकाश, फिलिप्स बल्ब
बल्ब सधैं रमाईलो छ। मध्य उन्नीसौं शताब्दीदेखि, जब यो आविष्कार गरिएको थियो। खुशी, सुरक्षाको भावना दिए। यो प्रयोग गर्न सहज थियो, सूर्य जस्तो ढोंग गरी, जुन कुनै पनि समयमा खोल्न सकिन्छ। फिलिप्स बल्ब पक्का छ ...
फिलिप ह्यूको साथ प्रकाश क्षेत्र
ces2020, फिलिप्स, फिलिप ह्यू
CES 2020 को प्रतिध्वनि रोकिदैन। नयाँ उत्पादनहरूका बारे जानकारी जुन त्यहाँ देखाइएको छ अझै इन्टरनेटमा देखा पर्दछ। ती मध्ये एक फिलिप ह्यु प्रकाशको लागि जोनहरूको परिचय थियो जसले अझ राम्रो निजीकरणको लागि अनुमति दिनेछ ...